केही अगाडि कान्तिपुर कोसेलीमा कवि विनोदविक्रम केसीको शक्तिशाली कविता छापियो । समृद्धि एक कुविचार । कविता पढेपछि मनमा एउटा बीभत्स चित्र बन्यो । खण्डहरजस्तो । जस्तो कि गाउँको पाटाबारीमा समृद्धिको महाउत्सव छ ।
नेपाल र भारतबीच प्रगाढ र निकटतम सम्बन्ध रहेको दुवै देशका आधिकारिक व्यक्तिहरूले प्राय: दोहोर्‍याइरहन्छन् । यो सम्बन्धलाई अथ्र्याउन अरू उपमा पनि जोडिने गरेका छन् । दुई देशबीच कायम ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ दुवै पक्षबाट अरूभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दावली पर्छ ।
केही वर्ष पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पुर्व उपाध्यक्षले पंक्तिकारसँग विदेश जाने प्रसंगमा भनेका थिए, 'सजिलै जान पाए नेपालीहरु चन्द्रलोक पनि पुग्थे ।'
सरकारप्रति औंला ठड्याउने अधिकार हुनुपर्‍यो । तर कहाँ, को, कति, कसरी, के–कुन, कस्तो बोल्ने हुन्, त्यसको निर्धारण जनताको ‘मत’बाट चुनिएका प्रतिनिधिले निर्देशित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अहिलेको सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको छ ।
सन् २०१७ को अन्ततिर दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा विन्स्टन चर्चिलसँगै सम्बन्धित चलचित्र ‘डार्केष्ट आवर’मा चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि तिनलाई हिटलरसँग शान्ति सम्झौता गर्नैपर्ने आन्तरिक दबाब आफ्नै मन्त्रिपरिषदबाट चर्को थियो । तर पनि चर्चिल हिटलरसँग सम्झौता नभएर भिड्ने पक्षमा नै थिए ।
अमेरिका र चीन बीचको व्यापार द्वन्द्वले यतिबेला विश्वकै ध्यान खिचिरहेको छ । अमेरिका संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र हो भने चीन दोस्रो ठूलो । डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनावको दौरानमै आफूलाई व्यापार संरक्षणवादको पक्षमा खरो प्रस्तुत गरेका थिए । ओभल अफिस सम्हालेको झन्डै दुई वर्षपछि उनले त्यसलाई कार्यान्वयन तहमै लैजान थालेका छन् ।
सानो छँदा अक्षय तृतीयामा सातु र सर्वत खान ठुलीआमा, सानीआमा, फुपू, काकीहरूकहाँ जान्थ्यौं । सातु र सर्वतले पेट भरिएपछि भातै खाइँदैनथ्यो । त्यसबेला थाहै थिएन, हामीले त अति स्वस्थकर सातु र भिटामिनले भरिपूर्ण कागतीको सर्वत पो खाँदा रहेछौं ।
‘एनौले, छोरोलाई पढाउँछस् ? दरबारमा दाखिला गर्दिऊँ ?’ जर्साबले घोडा माथिबाटै सोधे । मेरो जिजुबाको उत्तर थियो, ‘सरकार, यल्ले पढेर के गरोस् ? बरु आफ्नु इलम जाने भोकै मर्दैन कि हजुर †’ छेउमै टुलुटुलु हेर्दै भोल्टा तुन्दै गरेका ७–८ वर्षका मेरा हजुरबालाई ‘पढ्छस् त ?’ भनेर कसैले सोधेन ।